Canary ကျွန်းများတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 1 နှင့် 2
Canary ကျွန်းများတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 1 နှင့်21 months ago 8 တစ်နှစ် #1243
ကိုယ့်ကိုနောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ဂျမ်ဘိုမှ resubbed နှင့်ဈလာပြီစောင့်ရှောက်လုံးကိုအဘယ်သူမျှမ file ကိုအကျင့်ပျက်ခြစားမှုလည်းမရှိ, ဖိုင်တွေအားလုံးကိုအတူတူဖြစ်ကြောင်းအခါ, ဖိုင်တွေပျောက်ဆုံးအကြောင်းကိုအချို့သောမှိုဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့် installer ကိုအဲဒါကိုရှာတွေ့ couldnt ဖိုင်တစ်ခုကိုရှာဖွေထွက်စေသည် 0.o
ဒီအဘို့ဖြစ်၏ fsx ရေနွေးငွေ့ထုတ်ဝေ။
.. ကိုယ့်ဟာပြီးပြည့်စုံသောလတ်ဆတ်၏ install လုပ်ဒီအံ့မခန်းရှုခင်းအတိတ်ကာလဿုံအလုပ်လုပ်ခဲ့ထားပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကိုယ့်အရင်းမြစ်များလိုအပ်သောကွောငျ့ဈက uninstall လုပ်ဖို့ခဲ့ fsx နှင့်ရုတ်တရက်ဒီထို့နောက်ပြဿနာမရှိဘဲလေဆိပ်ရာပေါင်းများစွာကို install နှင့်။ မည်သည့်အကူအညီကိုတန်ဖိုးထားလိမ့်မည်ဟု!
Canary ကျွန်းများတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 1 နှင့်21 months ago 8 တစ်နှစ် #1246
1.Maybe သင့်ရဲ့ Browser ကို smth တက် messes ... ဒေါင်းလုပ်ဆွဲဘို့မှာ chrome လိုသည်အခြားတဦးတည်းကြိုးစားကြည့်
ဦးသည်အခြားဆော့ဝဲနှင့်အတူအထုပ်ဇီပ်ဖို့ကြိုးစား 2.Did? (ဦးမတိုင်မီအသုံးပြုသောဘာပဲ) 7zip သို့မဟုတ် WinRAR ကြိုးစားပါ
Ahh နှင့် btw ကပျောက်ဆုံးနေတဲ့သောဖိုင်သနည်းဟူမူကား
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မှု - ဖြင့် SkipperLP။ အကြောင်းပြချက်: Smth ငါ့စိတ်ထဲသို့ရောက်ကြ၏